Shiinaha Imidazole Soo-saar iyo Warshad | Freemen
CAS Maya: Qaybinta
Daahirnimo (GC): ≥99%
25kg / Fiber durbaanka, 9Mt / FCL
UN 3263, Fasalka: 8, Kooxda xirxira: III
Agent Daweynta wakiilka ama xawaaraha dareeraha epoxy;
Industry Warshadaha dawooyinka, dhexdhexaadiyeyaasha kale ee API, sida Imazalil, Tioconazole, Bifonazole.
Material Walxo cayriin oo sunta cayayaanka loogu talagalay iskudhafka boric acid, diyaarinta cayayaanka iyo bakteeriyada.
Ida Imidazole waa shey ceyriin aad muhiim u ah isla markaana dhexdhexaad u ah warshadaha kiimikada wanaagsan, oo leh codsiyo kala duwan. Imidazole kuma koobna oo keliya asiidhyada amino acids ee ribonucleic acid iyo deoxyribonucleic acid, laakiin sidoo kale waxay ku jirtaa amino acids. Isla mar ahaantaana, waa qayb qaabdhismeedka wax ku oolka ah ee sunta cayayaanka badan, ka hortagga enzyme, daroogooyinka iyo kiimikooyinka wanaagsan. Sidaa darteed, imidazole iyo waxyaabaha ka dhasha ayaa had iyo jeer ahaa kuwa kulkulul cilmi baarista. Sababtoo ah giraanta imidazole ee imidazole iyo waxyaabaha ka dhasha waxay ka kooban yihiin laba atam oo nitrogen ah, oo loo isticmaali karo deeq bixiye elektaroonig ah oo fudud, imidazole sidoo kale waa mid ka mid ah kooxaha sida caadiga ah loo adeegsado shaqooyinka ku jira kiimikada ku-meelgaarka ah.
IdaImidazole waxaa loo isticmaali karaa inuu ahaado wakiilka daweynta ee epoxy resin, wuxuu hagaajiyaa astaamaha farsamo ee alaabada sida foorarsiga, fidinta iyo riixitaanka, hagaajinta sifooyinka korantada ee dahaarka iyo kiimikada iska caabinta. Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa kumbuyuutarrada iyo qalabka korontada; waxaa loo adeegsadaa looxyo wareegsan oo daabacan iyo wareegyada isku dhafan sida wakiilka antirust ee naxaasta; sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa qalabka elektarooniga ah;
☑Waxaa loo isticmaalaa walxaha cayriin ee dawooyinka, sida wakiilada antifungal, wakiilada antifungal, wakiilada hypoglycemic, plasma aan dabiici ahayn, wakiilada trichomonal, wakiilada neefta ee bronki, wakiilada anti finan, iwm; waxaa loo isticmaalaa walxaha ceyrsan ee sunta cayayaanka, iskuxirka wakiilada boric acid, diyaarinta sunta cayayaanka iyo fungicides; Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa daawada urinta formaldehyde resin, daawooyinka sawir qaadista, kooladaha, dahaadhka, wakiilada daweynta caagga, wakiilada anti finan, iwm Waa sheyga ceyriinka ee wakiilka korontada iyo isku-dhafka dabiiciga ee dhexdhexaadka ah
In ka badan 30 sano oo khibrad wax soo saar ah;
Material Waxyaabaha diiwaangashan sida waafaqsan sharciyada EU-REACH;
Badeecad ay ansixiyeen dalal badan oo kaladuwan;
D Alaab-Gaarsiinta-Waqtiga-Tooska ah: 1 toddobaad waqtiga hoggaanka.